Faka isuti yeAircrack kuUbuntu | Ubunlog
Faka isuti yeAircrack ku-Ubuntu
Indawo yomoya yinkqubo yovavanyo lokhuseleko kwinethiwekhi engenazingcingo Iseti yezixhobo ezisebenza kunye esinokuthi sivavanye ukhuseleko lwenethiwekhi ye-Wifi, sisebenzisa le suite phantsi komgca wokuyalela.
Indawo yomoya ivumela ukuba senze uphicotho-zincwadi ngenxa yenani elikhulu lezixhobo elizisebenzisayo. Kuya kufuneka ndikhankanye ukuba ngaphakathi Iichipsets ezisebenza ngokugqibeleleyo nge-aircrack yiRalink. Ke ukuba ufuna ukwenza uvavanyo lwepentest ngoncedo lwesi suite Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ikhadi lakho leWifi lixhasa imo yokujonga.
Ngokuqinisekileyo uyazibuza ukuba ithini imowudi yokujonga? Ewe imo yokubek'esweni iyasebenza ukuze ikhadi lakho leWifi lingenise umsebenzi omnye, ngesiqhelo oku kuya kuba kwimowudi (ukumamela nokuthetha) neseva (ukuthumela nokwamkela iipakethi), kodwa ingaba uyenza imowudi yokujonga iliso kangakanani oku kunikezelwe ekuphulaphuleni (ekufumaneni iipakeji).
Ngaphakathi izixhobo esizifumana ngaphakathi kwisuti yeAircrack zezi:
Ngabo sinokwenza imisebenzi eyahlukeneyo enje ngokujonga iipakethi ezizithathileyo, inomnye umsebenzi onje ngokuhlaselwa esinokuthi siqinisekise abathengi abaxhunyiwe, senze iindawo zokungena ezingezizo kunye nabanye ngenaliti yepakethi.
I-Aircrack isebenza ikakhulu kwi-Linux, kodwa nakwiWindows, OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, kunye ne-eComStation 2.
Uyifaka njani iAircrack ku-Ubuntu?
Singafaka isuti yeAircrack kwinkqubo yethu Ukusuka koovimba abagcina Ubuntu, le ndlela iyasebenza nakwiziphumo zayo.
Kule nto Kuya kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo mthetho ulandelayo:
Nje ukuba inkqubo igqityiwe, kuya kuhlala kuphela ukuba uqale ngovavanyo lwakho lwesixhobo, ndingakucebisa eli khonkco lilandelayo Apho ungazi khona amanye amakhadi angenazingcingo ahambelana nesi sixhobo apho unokufumana kwezona ziphucukileyo ukuya kwezinye ezifanelekileyo kwiimvavanyo zakho zasekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Faka isuti yeAircrack ku-Ubuntu
Isixhobo esihle kakhulu !!!
Uphicotho-zincwadi luhlaziywa kuhlobo lwe-2.2.2
Izixhobo ezi-3 zonke umfoti ufuna Ubuntu